Cron & crontab, nanazava | Avy amin'ny Linux
Cron & crontab, nohazavaina
Lucaine dia namoaka taloha kelin'izay fampianarana tena tsara momba ny cron sy crontab izay heveriko fa mendrika zaraina. Cron dia karazan'asa mitovy amin'ny Voalamina Voasa amin'ny Windows, io ihany no itantanana azy io. Ireo izay tia interface tsara hita maso hahatratra tanjona iray ihany dia afaka mahita izany lahatsoratra hafa.
1 Inona no atao hoe cron?
3 Inona no atao hoe Crontab?
4 Mampiasa crontab
5 Manampia asa ao amin'ny crontab
Ny anarana cron dia avy amin'ny kronos grika izay midika hoe "fotoana." Ao amin'ny rafitra fiasan'ny Unix, ny cron dia mpitantana dingana mahazatra (daemon) izay mihazakazaka ny fizotrany na ny script amin'ny fotoana maharitra (ohatra, isa-minitra, andro, herinandro, na volana). Ny fizotra izay tsy maintsy tanterahina sy ny fotoana tsy maintsy hanatanterahana azy ireo dia voalaza ao amin'ny rakitra crontab.
Ny daemon cron dia manomboka amin'ny /etc/rc.d/ o /etc/init.d arakaraka ny fizarana. Mihazakazaka any aoriana i Cron, manamarina ny latabatra fiasana crontab isa-minitra / sns / crontab na in / var / spool / cron amin'ny fikarohana asa hotanterahina. Amin'ny maha mpampiasa antsika dia afaka manampy baiko na script misy asa hamakivakiana ireo dingana sasany isika. Ilaina ity, ohatra, mba hametrahana automatique ny fanavaozana ny rafitra na rafitra famerenana tsara.
Inona no atao hoe Crontab?
Crontab dia rakitra an-tsoratra tsotra izay mitahiry ny lisitry ny baiko hatao amin'ny fotoana voafaritry ny mpampiasa. Crontab dia hanamarina ny daty sy ora tokony hamonoana ny script na ny baiko, ny alalana famonoana ary hataony any aoriana. Ny mpampiasa tsirairay dia afaka manana rakitra crontab manokana, raha ny marina ny / sns / crontab Heverina fa rakitra crontab an'ny mpampiasa faka, rehefa te-hamorona rakitra crontab azy ireo ny mpampiasa mahazatra (ary na ny root aza) dia hampiasa ny baiko crontab isika.
Crontab no fomba mora indrindra hitantanana ny asan'ny cron amin'ny rafitra mpampiasa marobe, na amin'ny mpampiasa tsotra na amin'ny root root.
Manomboka amin'ny ohatra tsotra iray izahay.
Hanao ny automatisation ny fanavaozana ny rafitra iray isika, hialana amin'ny mahasosotra ny "Tsy maintsy manavao foana aho ary tsy tiako izany!"
Voalohany indrindra dia hanao script izahay. Ity script ity dia hiantsoana an'i cron ary hahitana ny torolàlana rehetra tiantsika hatao, noho izany ilaina ny fitsapana azy amin'ny tranga maro sy amin'ny fomba maro alohan'ny hampidirana azy amin'ny cron, script fanavaozana tsotra toa izao:
#! / bin / bash #script ohatra fanavaozana #fidio ny fizarana # debian-ubuntu # apt-get update & apt-get -y fanavaozana #fedora #yum -y fanavaozana #Arch #pacman --noconfirm -Syu
Esory ny # amin'ny tsipika distro anao. Raha sanatria Ubuntu / Debian dia manomboka amin'ny apt-get izy io.
Izahay dia mamonjy ny script ho toy ny update.sh (ohatra, ny lahatahiry ny tranonao). Manova ny fahazoan-dàlana hamonoana an'io script io izahay amin'ny:
Izahay dia mihazakazaka ny script indroa mba hanamarinana fa mandeha tsara ny zava-drehetra, manova izay ilaina izahay (tsy tokony hisy lesoka izany, raha tsy cron dia hamerina ny hadisoana hatrany hatrany). Izao hanampiana ny lahasa amin'ny crontab anay.
Manampia asa ao amin'ny crontab
Izahay dia manatanteraka ny fanontana crontab amin'ny crontab -e, amin'ny distros sasany (toy ny Ubuntu) dia manome safidy antsika hisafidy ny tonian-dahatsoratra tadiavintsika, ny ambiny sisa tavela eto amintsika vi. Ho toa izao ny fisie crontab.
# mh dom mon dow baikon'ny mpampiasa
m mifanaraka amin'ny minitra hanatanterahana ny script, ny sanda dia manomboka amin'ny 0 ka hatramin'ny 59
h ny ora marina, ny endrika 24 ora dia tanterahina, ny sanda dia manomboka amin'ny 0 ka hatramin'ny 23, ary ny 0 dia amin'ny 12 ora alina.
Dom manondro ny andro amin'ny volana, ohatra, azonao atao ny mamaritra 15 raha te hihazakazaka isaky ny 15 andro ianao
Dow midika hoe ny andro amin'ny herinandro, dia mety ho isa (0 hatramin'ny 7, izay 0 sy 7 no Alahady) na ny litera 3 voalohany amin'ny andro amin'ny teny anglisy: mon, tue, wed, thu, pray, sat, sun.
mpampiasa mamaritra ny mpampiasa hampihatra ny baiko, mety ho faka izy io, na mpampiasa hafa raha mbola mahazo alalana hanatanteraka ilay script izy ireo.
didy manondro ny baiko na ny làlana tanteraka an'ny script hotanterahina, ohatra: /home/usuario/scripts/update.sh, raha miantso script izy dia tsy maintsy atao
Raha mazava ny ohatra vitsivitsy amin'ny asa cron dia nanazava:
15 10 * * * mpampiasa /home/user/scripts/update.sh
Izy io dia hihazakazaka ny script update.sh amin'ny 10:15 maraina isan'andro
15 22 * * * mpampiasa /home/user/scripts/update.sh
Izy io dia hihazakazaka ny script update.sh amin'ny 10:15 hariva isan'andro
00 10 * * 0 faka apt-get -y fanavaozana ny mpampiasa Root
Hisy fanavaozana izany isaky ny alahady amin'ny 10:00 maraina
45 10 * * Ny fakan'ny masoandro apt-get -y fanavaozana
Mpampiasa Root dia hanao fanavaozana isaky ny Alahady (Masoandro) amin'ny 10:45 maraina
30 7 20 11 * mpampiasa / home /usuario/scripts/update.sh
Amin'ny 20 Novambra amin'ny 7:30 no hitondran'ny mpampiasa ilay script
30 7 11 11 mpampiasa sun /home/usuario/scripts/pastel_con_velitas.sh
Amin'ny 11 Novambra amin'ny 7:30 maraina ary izany dia ny Alahady, hankalazain'ny mpampiasa azy ny sysadmin (izany hoe izaho)
01 * * * * mpampiasa /home/usuario/scripts/molestorecordatorio.sh
Fampahatsiahivana manelingelina isa-minitra isan'ora isan'andro (TSY soso-kevitra).
Mbola azo raisina an-tanana izy ireo faritra manokana:
Amin'ny 5:30 hariva isan'andro manomboka ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma.
Amin'ny 12 atoandro isaky ny voalohany, dimy ambin'ny folo sy faha-28 isam-bolana (mety amin'ny karama)
Raha misavoritaka ity dia tantanana crontab tady manokana hamaritana ireo tandavan-tany ireo.
@reboot Mihazakazaka indray mandeha, amin'ny fanombohana
Indraindray indray mandeha isan-taona i @yearly: 0 0 1 1 *
@izay mitovy amin'ny @taona
@monthly mandeha indray mandeha isam-bolana, andro voalohany: 0 0 1 * *
@weekly isan-kerinandro ny minitra voalohany amin'ny ora voalohany amin'ny herinandro. 0 0 * * 0 ″.
@ isan'andro isan'andro, amin'ny 12:00 A.M. 0 0 * * *
@ sasakalina mitovy amin'ny @ isan'andro
@ ora isaky ny minitra voalohany isan'ora: 0 * * * *
Ny fampiasana azy dia tena tsotra.
@hourly user /home/user/scripts/molestorecordatorio.sh @monthly user /home/user/scripts/backup.sh @daily root apt-get update && apt-get -y fanavaozana
Farany fa tsy latsa-danja amin'izay:
Fitantanana asa Cron
Soloy ny fisie crontab misy rakitra nofaritan'ny mpampiasa
Amboary ny fisie crontab an'ny mpampiasa, ny lahasa vaovao tsirairay dia ho lahasa crontab vaovao.
Tanisao daholo ny lahasan'ny mpampiasa crontab
Fafao ny crontab an'ny mpampiasa
Mamaritra ny lahatahiry crontab an'ny mpampiasa (tsy maintsy manana ny fanoratan'ny mpampiasa sy manome alalana azy ity)
mpampiasa crontab -u
awana hikirakira crontab an'ny mpampiasa hafa, ohatra:
$ sudo crontab -l -u faka $ sudo crontab -e mpampiasa2 #crontab -d -u mpampiasa
Ity fitaovana ity, toy ny maro hafa, dia azo jerena lalindalina kokoa sy amin'ny antsipiriany bebe kokoa amin'ny:
Boky fampianarana Crontab
Crontab amin'ny wiki ubuntu
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Cron & crontab, nohazavaina
Alvaro Ortiz sary placeholder dia hoy izy:
Ugh… somary misafotofoto ihany.
Valiny tamin'i Alvaro Ortiz
tonic dia hoy izy:
* / 30 tsy hita (eo amin'ny saha minitra) izay mandeha isaky ny 30 minitra ...
erm3nda dia hoy izy:
Izao fotsiny no holazaiko mandra-panapahako hevitra handinika ireo hevitra 😀
Ity fanovana ity dia fampahalalana tena lehibe sy zavatra tena ilaina.
Mamaly an'i erm3nda
Kika dia hoy izy:
Amin'izao fotoana izao aho dia mizaha fanamboarana isaky ny 45 minitra.
* / 45 * * * *, ary ny torolàlana dia tanterahina amin'ny 45 minitra isan'ora SY isan'ora. Izany hoe:
Mandeha amin'ny 3:45 izy, avy eo 4:00, 4:45, avy eo amin'ny 5:00, 5:45, 6:00, 6:45, sns.
Manana zavatra tsy mety aho? Inona no azoko atao mba hahavitana azy isaky ny 45 minitra fotsiny, na farafaharatsiny indray mandeha amin'ny 45 minitra isan'ora.
Valiny amin'i KIKA
hiahotrahoranareo dia hoy izy:
Salama tena ilaina ny fampahalalana mba hanazavana ny fomba fiasan'ny cron.
Mamaly an'i Slack
ho an'ny *
Tena tsara, misaotra anao nanazava ny fomba fiasan'ny cron .. andao hametraka tanana kely 🙂
Ity tsipika ity raha ny fahazoako azy dia hovonoina amin'ny 10:15 alina, ahintsio aho raha diso aho
Any no voalaza fa 10:15 maraina
Salama! fampahalalana tena tsara.
Mba hanatanterahana Script isaky ny antsasak'adiny, ny tsipika tokony ampiana amin'ny CronTab dia: "30 * * * * faka Scrip.sh" Mety? Misaotra anao indrindra!
Tsia. Raha tadidiko tsara dia tsy maintsy apetrakao / 30 * * * * faka Scrip.sh.
Izany hoe, ampio ny / alohan'ny 30.
Salama tiako ny hafatrao, feno tanteraka izy ity fa te hanontany zavatra anao aho.
Manana olana amin'ity baiko ity aho sy ny iray toa ny "at".
Te-handefa script amin'ny fotoana iray aho ary hametraka
ao amin'ny -f /home/mi_user/Desk/script.sh ohatra 18:08
ary ny script dia tsy novonoina teo amin'ny efijery.
Ary miaraka amin'i cron dia misy zavatra mitovy amiko, manitsy ny rakitra crontab amin'ny "crontab -e" aho
amin'ny farany ampiako ity tsipika ity:
ary tsy manao na inona na inona izy, tsy mampiseho ny script.
Misy sosokevitra ve? Misaotra betsaka ary mifona amin'ny fanelingelenana
Mba hiseho ny terminal dia mety mila mihazakazaka ny terminal ianao ary mandefa ny script ho masontsivana.
Ny masontsivana hampiasaina dia mety miovaova arakaraka ny emulator terminal ampiasainao.
Manantena aho fa mandeha io.
patrecas dia hoy izy:
Ankasitrahana ny fandraisana anjara.
Isa 10 !!
Mamaly an'i patretcas
Misaotra betsaka, nanampy betsaka ahy tamin'ny fanazavana zavatra vitsivitsy, fisaorana feno, amin'ny antsipiriany bebe kokoa na fisalasalana ho any amin'ny MAN PAGE aho, miarahaba hatrany.
jahir dia hoy izy:
Misaotra betsaka anao dadatoa, efa namaky sy nandinika ireo ohatra aho. misaotra betsaka ... azon'ny saina tokoa. mahafaly
Mamaly an'i jahir
Geovanni dia hoy izy:
Nampiasa ubuntu Server 12.04.2 LTS aho, ary ny kinova crontab izay ananako, hamafana ny lisitry ny asan'ny mpampiasa no ampiasaina, crontab -r (sy -l, araka ny voalazan'ity boky ity). Azo antoka fa amin'ny alàlan'ny kinova izany.
Etsy ankilany, crontab fotsiny no nataoko taloha ary ity no mamela ahy hamorona rakitra famonoana ahy manokana, saingy tsy io no novonoina. Ilay mandeha dia ilay ao amin'ny / etc / crontab. angamba hisy hampiasa ny hevitra.
PS (nitady tamin'ny toerana misy azy aho ary aiza no misy crontab fa ny adiresy voalaza etsy ambony sy ny rakitra hafa ihany no naveriny, ka raha ilay novonoina dia ilay tao amin'ny / etc / crontab, fa rehefa nanatanteraka ilay baiko crontab -e dia niseho ny ahy. miaraka amin'ireo asa rehetra nofaritako) aiza no anaovana izany rakitra izany ???? Salama. Midira amin'ny root foana aho.
Valiny tamin'i Geovanni
Tena tsara, tena ilaina !!!
Salama, tiako ny hanao an'ity ………… «15 10 * * * faka ifdown et0»
izany dia milaza fa amin'ny fotoana iray dia maty ny karatra tambajotra ………… tsara, napetrako tao amin'ny crontab izany ary tsy nety izy …… .. inona ny?
Tsy nahalala ny famaritana ny "mon" ianao taorian'ilay lohateny hoe "Add task to crontab"
Mbola tsara ny lahatsoratra, tena ilaina tokoa ny cron.
Nangatsiaka tokoa ity lahatsoratra tsara ity, manontania ahy
Raha te-hitazona ireo rakitsoratra navelako tamin'ny fanatanterahana asa aho, aiza no hahitako azy?
dia decdir Te-hahita ny tantaran'ny fihetsika natao tamin'ny lasa an'ity rakitra ity aho ary tiako ho hita hoe iza no nanova azy sy ny daty
Valiny amin'i OScar
Te hijery ny tantaran'ny fanovana an'ity aho
Andres Ledo dia hoy izy:
Heveriko fa ao amin'ny script ubuntu dia nanao hadisoana ianao, ap-get -y fanavaozana no apetrakao fa tsy apt-get -y fanavaozana. (Namela t ianao).
Valiny tamin'i Andrés Ledo
Toy izany koa. Misaotra anao!
Te hahafantatra ny fomba famoronana rakitra cron aho mba hahafahanao mamaritra ny ora tsirairay rehefa ampiharina, ny lahatahiry sns.
Valentine dia hoy izy:
Misaotra anao nanazava ny fandidiana sy ny baiko fototra ho an'ny cron, ankehitriny mba hampiala voly kely ny tenanao.
Mamaly an'i Valentin
Isaky ny mitady fampahalalana momba ny lohahevitra rehetra mifandraika amin'ny Gnu / Linux aho dia mandehandeha amin'ny farany mahita hatrany amin'ny 90% amin'ireo tranga ireo ny fampianarana tsara indrindra ao amin'ity fiarahamonina lehibe ity, mieritreritra aho fa manomboka izao dia hanomboka eto aho ary avy eo any an-kafa. .
Valiny amin'i Sander
Misaotra Sander! Famihinana! Paul.
dom = andro isam-bolana
dow = andro amin'ny herinandro
mora kokoa izany raha mifanerasera
Misaotra betsaka, feno ary nanazava tsara.
Maxillia dia hoy izy:
Ity zavatra ity ihany no nomen'ny mpampianatra Operating Systems antsika, tsy manova na inona na inona aho, izao hitako izao ny antony ratsy dia ratsy ny kilasy .-. Eny, mitovy amin'ny devoara xD io.
Valiny tamin'i Maxillia
Fanontaniana, azo ferana ve ny faharetan'ny asa iray?
Ohatra, misy lahasa ataoko izay mamerina ny tenany isaky ny 5 minitra, amin'ny famerimberenana raha mbola miasa io asa io dia avelao izy hamono azy ary averina indray.
aj dia hoy izy:
Inona ny baiko isaky ny terminal manampy asa ao amin'ny crontab (tsy miditra amin'ny crontab ary manampy azy ireo amin'ny 'crontab -e' na manolo ny crontab amin'ny crontab iray hafa miaraka amin'ny 'crontab file').
Ny hevitra dia ny famoronana script ivelany hanampiana ireo lahasa amin'ny crontab
Mamaly an'i aj
amiko dia azonao atao ny mampiasa 'akony' na inona na inona tianao ampiana '| saka >> 'cronotab path (/ etc / cronotab)' «
Raphael Vera dia hoy izy:
Ahoana no fomba fihazakazahana fomba fiteny iray isaky ny 3 andro
Valiny tamin'i Rafael Vera
Manana olana amin'ny fanatanterahana asa cron aho.
I cronta -e no ampiasako ity asa manaraka ity:
fa ny asa tsy vita. Nojereko fa ny myfile.sh dia manana alalana famonoana ary ny mpampiasa izay manatanteraka azy dia faka.
Mihazakazaka mitovy asa ao amin'ny / etc / crontab aho ary aorian'ny famerenako ny serivisy dia tsy mandeha amiko izany.
Ny atin'ny myfile.sh dia baiko izay manavao DB ary raha mihazakazaka ao amin'ny console aho dia miasa.
fredd dia hoy izy:
Mety tsy manana fahazoan-dàlana rehetra ny mpampiasa database ary tsy maintsy manondrana ireo fiovan'ny tontolo iainana avy amin'ny motera fitahirizanao aloha ianao.
Ohatra ao amin'ny db2 ity andalana ity dia handeha amin'ny fiandohan'ny script
. / trano / db2inst1 / sqllib / db2profile
Ny antony iray hafa dia mety hoe ny script dia mitaky fifandraisana amin'ny database, ataovy ny fifandraisana amin'ny database ao anaty script
Valiny tamin'i Fredd
LA3 dia hoy izy:
Tsy fantatro fa tsy maintsy averiko indray ilay vatolampy, niady tamin'io aho nandritra ny fotoana kelikely
Valiny amin'i LA3
Kenia dia hoy izy:
Hahafantatra izy ireo ny fomba hanondroana fa ny asa dia tanterahina isaky ny faran'ny volana, amin'ny fotoana voatondro .. ny antsipiriany dia tsy azoko ny fahafantarako fa mitaky ny andro farany isam-bolana .. ??? Tsy maintsy nosoratako tsirairay izy ireo fa rehefa tonga ny faran'ny volana febroary fa biciesto dia sarotra amiko ..
Mamaly an'i kenya
Ahoana no fomba hampijanonako ny fizotran-draharaha izay tanterahina ao amin'ny crontab?
dingana * …………
Julianna dia hoy izy:
Mety ho afaka manampy ahy ve ianao? eu tenho um script nataon'i minha mpanoratra izay tsy mandeha amin'ny crontab! Aza hadino ny permissх rehetra, fa tsy cron na mpampiasa manokana afaka manatanteraka azy-fa tsy misy zava-mitranga! Te hahafantatra aho raha afaka manampy ahy ianao, misy zavatra hafa tsy mandeha amin'ny laoniny! Vlws
Valiny tamin'i Julianna
Anthox dia hoy izy:
Ahoana no hametrahanao lahasa asa iray isaky ny andro farany amin'ny volana (andro: 31-30-28)?
Mamaly an'i Antox
tfercho dia hoy izy:
Araka ny efa fantatrao, ny baiko su dia ampiasaina hanovana mpampiasa amin'ny console. Raha mampiasa ny command su aho izao: "ny mpampiasa anao" manova mpampiasa fa tsy misy fanovana araka ny tokony ho izy ny "mpampiasa", raha mihazakazaka su aho toy ny: "su - mpampiasa" manova ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny fandefasana ny toeran'ny mpampiasa. Amin'ny cron no ilazako ny mpampiasa, fa ahoana kosa no hamenoako ny fikirakiran'ity mpampiasa ity?
Mamaly an'i tfercho
Ary raha te-hampijanona azy aho?
regi dia hoy izy:
Tsy fantatro izay tsy mety ataoko, fa manaraka ny dingana aho ary tsy misy fanatanterahana. Nanandrana aho:
* * * * * faka / usr / bin / gedit
* * * * * faka usr / bin / test.sh
ary tsy misy mihitsy. Tsy manatanteraka na inona na inona izy io. Namerina namerina sy ny zava-drehetra aho.
Mamaly an'i Regi
Ferqos dia hoy izy:
Mamaly an'i Ferqos
Ny Firefox Developer Edition dia azo tsapaina ankehitriny. Ny fifandraisako voalohany
Famakafakana kely sy famerenana ny Slimbook, ultrabook izay miaina ny GNU / Linux